ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အထူးသံတမန်နှင့် အင်တာဗျူး (ရုပ်သံ)
အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အထူးသံတမန်နှင့် အင်တာဗျူး (ရုပ်သံ)
မြန်မာနိုင်ငံရဲ. ကျန်းမာရေးကုသစားရိတ်ဟာ ပုဂ္ဂလိက ဆေးခန်းတွေမှာ သာမန် ပြည်သူတွေရဲ.၀င်ငွေနဲ. ယှဉ်ရင် အလွန်များပါတယ် ၊
ပိုဆိုးတာက ဆရာဝန်( ၉၀%)တွေရဲ. လူနာတွေအပေါ် ထားတဲ. စိတ်ဓါတ် ၊ လူနာ ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခ ယူတဲ.ပုံစံ ၊ မိမိ လူနာအပေါ် စေတနာထားတာဝန်ယူမှု တွေ ကို နိုင်ငံတော်က စည်းကမ်းဥပဒေတွေ ထုတ်ပြီး အမြန် ပြုပြင် ပြောင်းလဲဖို. လိုနေပါပြီ ။
... ဆရာဝန်တွေ ဆေးခန်းထိုင်တာဟာ စားဝတ်နေရေး
အတွက်မဟုတ်တော.ဘူး ၊ကျိကျိတက် ချမ်းသာ သထက် ချမ်းသာလာရေးဖြစ်နေတယ် ၊
.... ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခုပါ ... လှိုင်မြို.နယ်က ကျောင်းဆရာမ တစ်ယောက် ချောင်း ဆိုးလွန်းလို.အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး နဲ.
.. ဓါတ်မှန်ရိုက် ပါ လို.ဆေးစာအုပ်မှာညွှန်ကြား ၊
ပြီးတော. စမ်းသပ်ခ ၆၀၀၀/ ... ယူတယ် ၊
နောက်နေ. ... ခင်ဗျားအဆုတ်က ကောင်းနေပါလား
... သွေးသွားစစ် ပါ .. ဆိုပြီး ၆၀၀၀/ ..
ထပ်ယူတယ် ၊ သွေး အဖြေရတော.ကောင်းနေတယ် ၊ဒါပေမယ်. ဆေးတွေ ပေးတယ် ၊ ချောင်းဆိုး တာကမပျောက်ဘူး၊ ဒီလိုနဲ. အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ၂ ယောက် ၊
ရိုးရိုး G/P ၃ယောက် လောက် ပြပေမယ်. ငွေတွေ ကုန်ပြီး မပျောက်ဘူး ၊
.. အဲဒီဆရာမလည်း ဆရာဝန်ဆို မပြရဲတော.ဘူး ၊
ဗမာဆေးတွေ ၀ယ်သောက်လည်း မရဘူး ၊
နောက်တော. လူတယောက်က .. ဆရာမ .. ဆောင်းရာသီအအေးဒါဏ်ကို အဆုတ်က မခံနိုင်လို. ၊
နေ.လည် နေပူထဲမှာခန္ဒာကိုယ် နေပူလှန်းပါ ၊ ချွေးစိုတဲ.အထိနေပူထဲ လျှောက်ပါ ၊ လို.အကြံပေးတာ
လုပ်လိုက်တော. ၅ ရက်လောက် မှာသက်သာလာပြီး ပျောက်သွားတယ် ။
.... ဆိုလိုတာက ဆရာဝန်တွေက လူနာတွေ ဆီက
ငွေကြေး ကို ရသလောက်ချွေယူချင်ကြပေမယ်.
ရောဂါပျောက်အောင် လုပ်ပေးရမယ်. ၀န်ဆောင်မှုကို
တော. မကျေပွန်ကြဘူး ။
.. ကုန်သင်.တာထက် လူနာပိုကုန်ပေမယ်. ရောဂါပျောက် သွားရင် တော်သေးတာပေါ. ။
ဒီဖြစ်စဉ်မျိုး .... သေလောက်တဲ. ရောဂါဖြစ်လို.
အသက်ဆုံးရှုံး သွားရတဲ. ပြည်သူတွေ အများကြီးပါ ။
နိုင်ငံတော် မှ အခြေခံဝန်ထမ်းတွေနဲ. အောက်ခြေဆင်းရဲသားများအတွက် ကျန်းမာရေး စောင်.ရှောက်မှု ကိုစဉ်းစားပေးသင်.ပါပြီ ။